Fifidianana : Mbola manana safidy efatra ny ankolafy Ravalomanana – MyDago.com aime Madagascar
Hiditra amin’ny paikady sy drafitra manaraka ny ankolafy Ravalomanana, ankoatra ny mety ho vokatry ny diniky ny Sadc sy ny filoha Ravalomanana.
Manana lalana sy safidy efatra ity ankolafy ity manoloana ny fifidianana.
Eo aloha ny mety hanohanana kandidà amin’ireo 33, afaka hifaninana raha mbola te handray anjara amin’ny fifidianana izy ireo. Efa mandeha ny feo fa dimy ireo kandidà , akaiky na koa mety hironan’ny filoha Ravalomanana. Anisan’izany, Radavidson Andriamparany, ny Dr Jean Louis Robinson ; Ratrema William ; Rajemison Rakotomaharo efa talen’ny fampielezan-kevitry ny filoha teo aloha ny taona 2001. Manampy ireo, Rakoto Andrianirina Fetison. Tsy mbola nisy anefa fanapahan-kevitra momba izany.
Safidy faharoa, mety hiala amin’izao tetezamita sy ny fiaraha-mitantana izao izy ireo ary hitarika ny vahoaka hidina an-dalam-be ary tsy hanaiky izay voka-pifidianana eo. Manana vahoaka maro an’isa ny Ankolafy Ravalomanana, hahasahy hirotsaka an-dalam-be manoloana ny herim-pamoretana ve anefa ireo vahoaka ireo? hahasarika azy ireo ve ny mpitarika? Hampiova ny fijerin’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny fahitana vahoaka an’alin’alina hidina an-dalam-be indray.Mety tsy hanohana kandidà ihany koa ary hanome safidy malalaka ho an’ireo mpomba azy manoloana ireo kandidà 33.
Hamerina ny tantara
Ankoatra izany, hamerina ny tantara indray izy ireo raha hiantso ny olona sy ny mpomba azy tsy hifidy ary tsy hanaiky ny ho voka-pifidianana eo. Midika fa hanohitra ny ho filoham-pirenena voafidy eo sady tsy hiditra anaty fitondrana raha hizotra amin’io lalan-kevitra io. Tsy mifanalavitra amin’ny nataon’ny Pr Zafy sy ny mpiara-dia aminy na koa ny amiraly sy ny ekipany tamin’ny fotoan’androny. Hanimba ny antoko sy ny ankolafy ary ireo mpomba azy anefa izany. Ho tonga amin’ny fizarazarana tanteraka sy haha rava azy ireo izany. Efa niseho izany, tamin’ireo mpomba an’i Deba sy Zafy, niparitaka niditra anaty fitondrana ny sasany raha nijanona ety ivelany, nanohitra ireo mpitondra hatrany kosa ny hafa.
Na eo aza anefa ireo, manana ny paikadiny sy ny heviny manokana ny filoha Ravalomanana. Nihaona tamin’ny Sadc rahateo ny tenany anio, ary nampanantena ny handray fanapahan-kevitra sy hanambara izany amin’ity herinandro ity. Mbola mametraka fahatokisana tanteraka amin’ny filoha Ravalomanana ny vahoaka Malagasy ankehitriny amin’izay paik’ady hitondrany ny tolona.
Auteur Solo Razafy*Publié le 28 août 2013 29 août 2013 Catégories Politique
11 réflexions sur « Fifidianana : Mbola manana safidy efatra ny ankolafy Ravalomanana »
Hampiaro ny FEUILLE DE ROUTE raha tena olon-kendry ny COMMUNAUTE INTERNATIONALE, ao koa ny MENA SOFINA indrindraindrindra i SISANY NO, ankoatrizay HAOTRA.Mihevitra angamba ry zareo ireto fa hilamina ny TANY.
Ny any am-paosiny no milamina fa tsy ny tany veli2.
TSY MANDRAY ANJARA FOTSINY IZAO DIA VITA .
Ilay safidy faharoa aloha dia manonofy izay manantena an’io. Jereo fa mivoraka tavy daholo ireo izay nididtra tao ary tsy hanaiky ny hiala ao ireo na hitabataba aza ny filoha Ravalomanana.
Ny tsy hifidy koa dia fandrika ho an’ny tena koa tsy azo atao.
Ny safidy tokana azo atao izao dia ny manakana an’io fifidianamoza io. Hanao izay efany ireo vahiny hanerana toy ny mahazatra an’io fifidianana io fa anjaran’ny vahoaka no manakana an’io raha tena mazoto izy. Toa nofy koa anefa izany satria ilau vahoaka mpanohana an’i Ravalomanana toa efa tsy te hihetsika andalambe na amin’ny fomba hafa hatrizay.
Tsy ho nofy intsony ity fa dia ho foza tanteraka ary ho amin’ny aradalana ny mbola hitondra ny tany sy ny firenena eo.
Safidy tokana : Rava ny tondrozotra ary ampiarina ny Lalàna rehetra izay mifehy ny vahoaka, ny tany sy ny Firenena !
Tamin’ny 2009 ny Filoha Ravalomanana dia efa tsy nanaiky an’io, fa maro ireo efa nitetika zavatra hafa, ka nanao izay nandresen-dahatra !
Efa ho dimy taona izao no nisian’ny fanonganam-panjakàna dia izao no vokany, satria ny jiolahy indray no navela hitantana ny Firenena !
Fanontaniana ho an’Ingahy Solo Razafy ?
Izea r’Ingahy ilay olona nirediredy izay nilaza taminao an’ireo lazainao fa « safidy efatra » ireo ?
Voalohany : Tao amin’ny Midi nilaza ny movansa fa tsy hanohana an’iza na iza !
Faharoa : Mahatsikaiky sy mahamenatra ny fanambaràna nataon’Ingahy Rakotoarivelo, izay hita ao amin’ny filazam-baovao ; nilaza izy fa hoe hangataka amin’ny SADC ny Filoha Ravalomanana mba hanendren’ny movansa olon-kafa !
Diso be mihintsy izany, satria tsy izany mihintsy raha ny fantatra no ao an-dohan’ny Filoha !
Na ny midi lazaina fa gazetin’i Mamy aza dia milaza hoe:tsy manohana kandida ny ankolafy Ravalomanana.Ka i Mamy indray no miteny mifanohitra amin’izay.Mahavariana!
29 août 2013 à 18 h 47 min
KM!Ity angamba ny valin’ny fanontaniana napetrakao amin’i Solo Razafy:
NOTAM dit :
Maninona raha karakaraina dieny izao ny NOTAM contre le retour de Rajoelina ? tsy avela hody eto Madagasikara intsony fa averina any ILe Maurice ny avion hahatongavany. Ny tody tsy misy fa ny atao no miverina Tompoko.
Aza mivadėkatėdoha fa safidy 4 aiza???
1 ihany ny safidy,tena efa HIVIKA KOTOVELO fa kely sisa.
Tsy haiko aza iny Gazety nivoaka iny hoe: » hilatsaka andeha @ tenany irery kotovelo »???
za aloha dia tsy gaga e!!!
TSOTRA NY HEVITRA E:GADRAINA TSY MISY HATAK’ANDRO ENY TSIAFAHY I DADA! HANANA LIBERTE TOTALE IRETO ZANANY AMIN’IZAY! I VAHOMBEHY NO HOFIDIN’IZY IREO!
Raha mandinika tsara isika dia ny fdr no fototra niorenan’io fitondrana transitaire io. Nanao transit tao avokoa ny zv drehetra sy ny bodo sy adala.
rajoelina no voalohany tsy nanaiky an’io fdr io izay nametraka azy ho pt.
Tsy nisy nifidy an’io fdr io ny vahoaka malagasy ankoatra ny mpanao politika.
Noho izany tsy fitantanana ny raharaham-bahoaka na repoblika io transition io.
Tsy manana fototra ijoroaa io transition io.
Mazava noho izany fa tsy ara-dalana io.
Na inona na inona holazaina dia ny repoblika faha 3 no mbola lalàna mipetraka. Raha nisy tokoa ny repoblika faha 4 ka lanim-bahoaka dia efa ela ireo nandany an’io no nijoro sy nitaky ny fampiharana azy.
Tsy fanohanana olona ny ara-dalàna fa fanarahana ny lalàna araka ny tokony ho izy sy izay dikan’izany.
Misy antso io napetraky Ratsimilaho. Vonona ny tenanay hanao zavatra tahaka ny t@ 2002. Mazava kosa anefa fa aoka tsy hanao zv kitoatoa ary aoka ho tsapanay fa tompony tsy mangataka atiny izahay.
Précédent Article précédent : RAVELOSON CONTANT : DAHALO CHISSANO
Suivant Article suivant : RANDRIAMAMIARIZAFY IGNACE : AZO ATAO NY MITORY NY CES